Ọtụtụ ndị na-ekwu na ịmụ asụsụ Chinese siri ike. N'ezie, ọ bụghị. Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na mkpụrụedemede ndị China chọrọ ọzụzụ nke iburu ihe n'isi, asụsụ China dịkwa mfe ma e jiri ya tụnyere asụsụ ndị ọzọ. Chinese Pinyin dị nkenke ma doo anya, edere na mkpụrụedemede Latin, na ọnụ ọgụgụ ...GỤKWUO »
N'oge na-adịbeghị anya, nwa akwụkwọ nwere ntọala efu zuru oke, mgbe ọ mụsịrị klas atọ, gwara m na ya ga-agbanwe na onye nkuzi nke pụrụ iche na Bekee n'ihi na ọ chọghị ịmụ ụtọ asụsụ China ma ọ bụ ihe metụtara HSK, kama ọ chọrọ ịmụ naanị ụfọdụ asụsụ ndụ kwa ụbọchị, dị ka Buyi ...GỤKWUO »
Kedu ihe bụ onye nkuzi mba ofesi nke China?
Ndị nkuzi mba ofesi mba China bụ ndị nkuzi na-akuzi Chinese dịka ụkpụrụ mba ụwa si dị, ebe ndị a na-akụzi ihe bụ ndị si mba ma ọ bụ mba ndị asụsụ obodo ha bụ asụsụ ndị ọzọ. Nchịkọta nke egwuregwu Olympic na World Expo enyela ụwa ohere ...GỤKWUO »